Madaxtooyadda Somalia oo eedaysay Puntland iyo Jubbaland iyo Xogta Shirkii | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madaxtooyadda Somalia oo eedaysay Puntland iyo Jubbaland iyo Xogta Shirkii
Muqdisho ( Kalshaale ) Shirkii u dhaxeeyay DFS, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa mar kale la isku mari waayay qodobadii doodda adag ka taagneyd ee ahaa in ajandaha lagu soo daro doorka hey’addaha amniga ee xilliga doorashada, si loo ogaado cida mas’uuliyadda leh.
Shirka maanta ayaa ku soo dhammaaday natiijo la’aan, iyadoo lagu balamay in mar kale la isku soo laabto, balse aan waqti la sheegin.
Dhinaca kale War soo baxay Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yidhi:
“Xukuumaddu waxa ay maanta u caddayneysaa Umadda Soomaaliyeed in labada Madaxweyne Goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalkaan ay ka dhacdo doorasho uu asaaskeeda yahay heshiiskii 17-kii September iyo is fahankii 16-kii Febraayo. Waana wax laga xumaado in labadaas Madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jiho diid aan doorasho oggolayn”.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42055
16 Comments for “Madaxtooyadda Somalia oo eedaysay Puntland iyo Jubbaland iyo Xogta Shirkii”
April 7, 2021 - 4:46 pm
Awelba waa la ogaa in ayna doorasho rabin labadan jaajuus, anigu waxaan ku talin lahaa labadooda ku xigeen haloo yeedho iyagana haday diidaan xabsiga dhexe ha lagu shalwiyo.
April 7, 2021 - 4:50 pm
Bill payers aka beesha lixaad
Aarmaajo haday u yeedhiyaan his rights
Aarmaajo you have the right to participate the upcoming election as a candidate
You have the right to remain villa wardhiigley till Election Day
Refusal to except those terms will result immediate removal of your candidacy.care taker government will be appointed immediately
April 7, 2021 - 7:44 pm
Kaahin muuse shaani u sheeg sheekada adiga oo idoor ah wax kaaga shan iyo toban ah baan jirin somalia iyo election kooda go and get a life maxaa ka galay koonfur iyo wixii is haystay noociina isku dirka la fadhiya social media da yaa laga amaan laayahay lakiin ilaahay dhibtad koonfur la rabtiin idinka ha idinku rido aamin
April 7, 2021 - 5:31 pm
Farmaajow cidna kuma necba laakiin dalkaan dhib badan ayuu soo maray Somali badan talo xumo u dhimatay.
Talo xumo dambe cidna laga yeelimaayo, doorasho qabo xalaal ah, waaba intaas oo aad ku guulaystee.
Weliba Somali oo dhan waxay ku tuseen in colaad Mareexaan ama Darood iyo mid Kacaankii loo qabin oo na hogaami lagu yiri; aqligii lagu qasaaray oo keligiis taliska oo Mareexaan qaxooti ka dhigay ayagoo Xamar hanti ku lahaa.
Buffalo ku noqo, daanyeer aqli xun, meeshii sixi lahaa qaladkii Daarood iyo Mareexaan galeen ayuu meeshii kasii wadaa..Geeljirta la taliyaasha u ah Farmaajo waa in dalka laga badbaadiyo.
April 7, 2021 - 5:43 pm
Walaahi Deni iyo Madoobe waa rag taariiqda xusi doonto, waa diideen in talada Somalia nin keliya ka go’do iyo gobolo curdan ah oo dhaqaale ahaan ugu tiirsan.
Somalia maanta ayey u baahnayd rag maya oran kara oo dhaqaale iyo xoog midna uga baahnayn Farmaajo.
Waa wadadii saxda ahayd in Saamilayda siyaasadda Somalia miiska lawada keeno oo garta wax ku leeyihiin.
-Prime ministaradii hore
-Beesha Caalamka oo biilka bixisa.
-Bulshada rayidka sida aqoon yahan, madax dhaqanka, dumarka etc.
Rajo yar ayaa muuqata..good lucky Maryooley.
April 7, 2021 - 5:48 pm
Waxaa kale idiin xasuusin Farmaajo Jubbaland xoog u sheegtay oo kala jaray..ciidan xoog leh tusay.
Puntland hanjabaad joogta ah iyo Gorgor Buurtinle ku dhow..kkkk
Deni page hoose wuxuu tusay in cidna xoog ula imaankarin oo ciidankiisa tusay.
Ahmed Madoobe waa in adagana beri na tuso in Kismaayo ciidan xoog loola imaan karin. kkkkkkkk
Wadada furan oo keliya tahay= Wax lagu heshiiyey…
Booto ayaa yaabtay..kkkkkkkkk
April 7, 2021 - 6:04 pm
Waxaan si gooni ah u xusayaa: Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, waa halyey taariiqda Somalida xusi doonto.
Wuxuu yiri: Beeshayda Isaaq ayaan ka diiday in Somali ka go’do, maanta kama yeelayo nin raba wadadii kaligiis talis nagu celiyo.
Mowqifkiisa wadanimo weligiis kama leexan sida kan Eelayga guddoomiyaha aqalka hoose jeebkiisa la fac ah.
Xoriyadda awalba reer Somaliland ayaa midnimo Somaliyeed keenay maantana loogama maarmo Somalia oo jiiro xun ka degeysa.
Hawiye beeso jecel meel u raaco ma aqaan, maalin beeso macne lahayn ayaa jirta oo mustaqbalka dhashaada baxar ku jiro. run.
Waan hubaa Deni millions dolar loo balan qaaday hadduu ilma Gareen ku biiro.
Laakiin wuu ogyahay in reer Puntland lacag gadan karin oo ceeb u dhiman haddii isku dayo.
Somali isku dhaqan maaha?.run😎
April 7, 2021 - 6:29 pm
Gar dhexa hadaan qaado, Deni & Axmed Madoobe arin khuseeya dadka ay metelaan iyo dawladooda ayay isku haystaan Farmaajo. Cabdi Xaashi laakiin xaq uma laha inuu ka daba yuuso/calaacalo Farmaajo waayo dad, dhul & Dawlad uu metelaa majirto. Xaqiiq.
Ina Sanweyne ayaa ii awoow ah, gartaa aan qaadayna dib loogu noqon maayo.
April 7, 2021 - 7:48 pm
Laalays muuse shaani u sheeg sheekada adiga oo idoor ah wax kaaga shan iyo toban ah baan jirin somalia iyo election kooda go and get a life maxaa ka galay koonfur iyo wixii is haystay noociina isku dirka la fadhiya social media da yaa laga amaan laayahay lakiin ilaahay dhibtad koonfur la rabtiin idinka ha idinku rido aamin
Governor Gedo wuu sii qorsheeyey shirka inaan lagu heshiin,anigu waan ogaa inuu yahay shirkaasi shimbirayohow heesa.
Farmajo waa hore ayuu Mursal ayuu 12 milyan u dhiibay si 2 sano loogu daro.
Waxaa laakiin maanta soo dadajiyey fashilka in uu Farmaajo keenay arin fajac ku noqotay 2 Nin ee ay meesha ku garamayeen.
1- In Gedo ay naoqoto maamul gobaleed cusub oo JL ka madax banaan.
2- Diidmada ku dhawaaqidda muddo xileedkiisa dhammaaday.
April 7, 2021 - 7:26 pm
April 7, 2021 - 8:14 pm
Nothing is more boring then guulwade (sycophant)going on and on about the way things used to be.
April 7, 2021 - 8:29 pm
Garoobihii Tegreegu waxay ku waasheen Beesha caalamku hana maanusho kkkkkkkk
Formaajo haduu ogolaado talo inangumeed oo qaato Beesha caalamku na galiso new colonisation,xoogagga wadaniyiintu dhagax ayay kaga saaridoonaan madaxtooyada.
April 7, 2021 - 9:11 pm
Guulwadayaashu waa labo waa nin qabiil ku raacay iyo foot soldiers ay ku shaqaystaan oo la yidhi kacaankaa ku xoraynaya ,,foot soldiers aka xoogaga wadaniyiintu durbaanka inay tumaan oo dadkaba ka qaylo bataan ayaa u caada ah waa shuqul africaan
April 7, 2021 - 9:41 pm
Horaan idinkugu sheegay inuu
Macangag Warlord Governor Gedo
Yahey ninkii WAALNAA EE LA SAAREY RITI
AAN LA RAR BARIN ee uu la cararey
– Waa sidaan rabey
KABLALAXOW idinkaa la idinku xisaabin
Wuxuu qaldo ama haleeyo
* Nin waalan walaalkiis ayaa u miir-qabo